Aung Kyawlin on Flipboard
144 Flips |3Magazines |2Likes |9Following |3Followers | @AungKyawlin6gk6 | Keep up with Aung Kyawlin on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Aung Kyawlin”
Some of the heaviest recent fighting in Myanmar has taken place in the ethnic Chinese populated Kokang region, one of the least known and most …
By မောငျမောငျစိုး 22 February 2017<p>Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.<p>တဖကျတှငျလညျး ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ NLD ပါတီ …
လျှို့ဝှက်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ အင်းယား
ကျိန်စာတိုက်ထားသော ရတနာများနှင့် ထူးဆန်းသော ရေနေသတ္တဝါများမှသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ နှိမ်နင်းခံခဲ့ရသော ဆန္ဒပြမှုများအထိ အရောင်အသွေးစုံလင်သည့် အတိတ်တစ်ခု …
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့်က တရုတ်တို့က တရုတ်နိုင်ငံကနေ အလယ်အာရှနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာကို ဆက်သွယ်ဖို့ The Silk Road (ပိုးလမ်းမ) မဟာဗျူဟာကို စတင် …
Nay Yan Oo ရေးသား၍ NLM ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ နေယံဦးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ပစိဖိတ်ဖိုရမ်၊ မဟာဗျုဟာနဲ့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဌာန၏ (CSIS) …
Trump နှင့် နေထိုင်ခြင်း
Donald Trump အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံလိုက်ရသည့်အခါ အမေရိကတွင် သာမက မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံတကာတွင် ကမ္ဘာပျက်မတတ် အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် …
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.<p>ယခုနှဈတှငျ အာဆီယံနှဈ ၅၀ ပွညျ့သညျ။ စဈအေးတိုကျပှဲ အရှိနျမွငျ့နခြေိနျတှငျ နိုငျငံ ၅ နိုငျငံက …
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi held talks with the Peace Process Steering Team (PPST) of armed groups in Nay Pyi Taw yesterday over several …
wdzshjkl – Eleven Media Group
<b>With the next peace conference in jeopardy, it is time for the government to fundamentally change its approach to the peace process.</b><p>ON THE first day …
<b>India’s commitment to bilateral relations has been questioned by those who wonder if it regards Myanmar as little more thanacorridor for trade with</b> …
Singapore's younger ministers will not be publicly given report cards by the Prime Minister on how they are doing in their jobs.<p>And while Prime …
Suu Kyi’s risky gambit against the military
နှစ်သစ်နှင့်အတူ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ မောင်တောနယ်စပ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု – Eleven Media Group
သြဂုတ် ၂၅ ရက်က စတင်ခဲ့တဲ့ မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း လေးလနဲ့ ၁၁ ရက်အကြာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်း ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်မှာပဲ …
China's President Xi Jinping warned Tuesday against scapegoating globalization for the world's ills or retreating behind protectionist walls, staking out an alternative vision for the international economy days before Donald Trump takes office.<p>The global economic order has been led for decades by …
In August 1967 five countries formed the Association of South-East Asian Nations, or ASEAN. Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and …
ဆက်၍ တင်ပြချင်သော ဥပဒေရေးရာများ “နိုင်ငံခြားသားများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း”
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဥပဒေကြမ်း တစ်ရပ်ကို အတည် မပြုမီ ပြည်သူ အများ သိရှိလေ့လာရန် အကြံပြုချက် တောင်းခံခြင်းသည် လွန်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် …
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်း ၂၈နှစ်ခရီး သင်ခန်းစာများနှင့် အပြုသဘောရှေ့ဆက် ထူထောင်နိုင်စေရေး
အာဏာရှင်စနစ်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးမှ ရုန်းထွက် ကြခြင်းကို ယနေ့မော်ဒန်စကားအရ ‘ဒီမို ကရေစီ အကူးအပြောင်း’၊ ‘ဒီမိုကရေစီ ဖော် ဆောင် ကူးပြောင်းခြင်း’ဟု …
According to Soros, liberal democracy is failing all across the western world. Apparently, this is because what he calls the “<i>open society</i>” is in …
ဦးနင်းပဲ့ထောင် မူဝါဒများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ
ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးအဖီးနှစ်ဆယ်ခန့်၏ အလေးချိန် ကြောင့် အိကျနေသည့် ဆိုင်းထမ်းနောက်တွင် ထိုင်နေ သည့် ဦးစိန်မန်း တစ်ယောက် ဟိုဒီငေးမောလိုက်၊ တစ်ခါ တစ်ခါ …
၂၀၁၆ အလွန် တစေ့တစောင်း
အခုဆိုရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကုန်ပြီး ၂၀၁၇ ခု နှစ်ဦးကူးနေတဲ့အချိန် ဖြစ်တယ်။ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အခါ နှစ်ဟောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ရလာတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို …
RANGOON – The government’s decision to detainaleader of armed group the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) “undermines the current peace …
<b>The Northern Alliance attacks in Shan State have highlighted the need foragreater effort to achieve an inclusive national ceasefire agreement.</b><p>By …
Dozens of people have been charged or jailed for allegedly defaming the regime that the Nobel laureate leads, raising fears of continued oppression<p>For decades, the punishment for speaking out against Myanmar’s rulers was simple and guaranteed:avery long stretch behind bars.<p>The new democratic …
<b>I.</b><p>THE NATION OF BURMA was born underadark star. At 20 past four in the morning, on January 4, 1948 — the specific time was determined by …
Behold, one of the most ethnic cuisines you will ever find.<p>Authentic Indonesian cuisine uses various blends of spices that can really work wonders …
Myanmar's Parliament Votes in Favour of GMS Tourism Office
Myanmar’s Pyidaungsu Hluttaw (Assembly of the Union) has voted in favour ofaproposal by President U Htin Kyaw (<i>pictured</i>) which would see the …